Wax walba oo ku saabsan Sida loo Isticmaalo iCloud, kaabta iCloud iyo iCloud Kaydinta
2 Sida loo isticmaalo iCloud
2.1 Calan iCloud
2.2 Isticmaalka iCloud Services
3 About kaabta iCloud
4 About iCloud Kaydinta
Hordhac kooban u Sida loo Isticmaalo iCloud, kaabta iCloud iyo iCloud Kaydinta
iCloud, Apple waxay bilowday sida habka ugu fudud ee aad u maamuli lahayd content: share ka mid ah iPhone, iPad, iPod iyo computer files, xog muhiim ah oo ku saabsan gurmad iPhone, iPad iyo iPod, soo celiyo qalabka macruufka la files gurmad oo la helo iyo tirtiro xogta laga badiyay qalab macruufka fog. Haddii aad qabtid qalab macruufka ah, iPhone, iPad, iPod, ama, waa in aad barataa sida loo isticmaalo iCloud. Maqaalkani waxa uu inta badan diiradda saarayaa 3 qaybood:
Qaybta 1. Sida loo Isticmaalo iCloud:
>> Sida loo dhigay ilaa iyo saxiixdo iCloud
>> Sida loo dhigay ilaa iyo isticmaali iCloud adeegyada (Photo Stream, Xiriirada, Mail, Kalandarada ......) Qaybta 2. Sida loo Isticmaalo iCloud kaabta: >> Sida loo gurmad xogta si iCloud >> Sida loo soo celiyo macruufka qalab la gurmad iCloud >> Sida loo eegista soo kabsado xogta ka iCloud gurmad Qaybta 3. Sida loo Isticmaalo iCloud Kaydinta >> Sida loo hubiyo kaydinta iCloud >> Sida loo ilaa iCloud kaydinta free >> Sidee si ay kor kaydinta iCloud >> Sida loo hoos kaydinta iCloud
Xagga sare, waxa aad ku arki kartaa qaabka qodobkan. Si aad u eegno qayb kasta, fadlan guji bar navigation bidixda ah.
Sida loo samaysay iyo Gal iCloud
Waa lacag la'aan ah inay la soo wareegto la iCloud. ID Your Apple samayn doonaa. Dadka aan haysan doorashada kasta ID gaar ah iCloud, ID Apple ah ayaa laga yaabaa in aad xisaabta iCloud. Sidaas, kiiskan, aadan u baahan tahay inaad saxiixdo akoon cusub u iCloud, laakiin saxiixa in iCloud la ID Apple aad. Haddii aadan hore u yeelan ID Apple ah weli, ee ha walwalin, waxaa aad u badan yihiin helaa in uu furmo calaamad kor loogu ID Apple Waxaan soo xusuusanayaa doonaa hoos ku qoran. Bal aan eegno sida loo dhigay ilaa iCloud on your computer iyo qalab macruufka hore. Kaliya ka dib markii si guul leh u fidinno iCloud on your computer iyo iPhone, iPod taabto, iyo iPad, waxaad si buuxda u isticmaali kartaa iCloud.
* On iPhone, iPod taabto, iyo iPad:
Tallaabada 1. Isku aad iPhone, iPod taabto ama iPad la Wi-Fi ama network ah oo deggan.
Tallaabada 2. Tubada Settings> General> Software Update si ay u arkaan haddii ay jirto update ah laga heli karaa qalab macruufka. Haddii aanay jirin, waxay ka dhigan tahay software-ka waa mid ka dambeeyay. Haddii ay jirto, waa in aad u cusboonaysiiso macruufka u dambeeyay mid ka mid ah.
Tallaabada 3. Settings tuubada> iCloud> galaan ID Apple aad. Haddii aadan hore u yeelan ID Apple ah weli, ka jaftaa "Get a ID Free Apple" daaqada ka mid ah oo la raaco kaaliyaha Mudanayaasha si ay u abuuraan ID Apple la cinwaanka emailkaaga ah.
Tallaabada 4. In loo sahlo adeegyada iCloud u barnaamijyadooda by kabacdi badhanka si ON ka sokow app kasta: Mail, Xiriirada, Kalandarada, Xusuusin, Safari, Notes, Passbook, Keychain, Photos, Documents & Data, hel My iPhone, iwm
* Dhinaca Mac:
Tallaabada 1. Riix inankeeda icon yar bidixda aad u sareeya of your computer Mac dooro Software Update. Haddii ay jirto update ah heli karaa, guji si aad u cusboonaysiiso WARSIDAHA X OS in nooca ugu dambeeya ee. Haddii aanay jirin, u gudub talaabo 2.
Tallaabada 2. Riix inankeeda icon yar mar kale iyo dooran rabtid System. Riix iCloud iyo saxiixa in la ID aad Apple (aan helay mid ka mid ah? Just ku qaataan dhowr daqiiqo si ay u abuuraan hal). Dooro adeegyada aad jeceshahay in aad awood u sax ku sameeyo sanduuqa adeeg kasta siday u kala horreeyaan.
(Ikhtiyaar) Tallaabada 3. Daahfurka iPhoto ama Aperture aad Mac. Guji ka icon Photo Stream on galeeysid bidix si ay u noqon on.
* Dhinaca PC Windows:
Tallaabada 1. Download iCloud Controal Panel on Windows oo ku xidh aad Windows PC.
Tallaabada 2. Open iCloud Controal Panel iyo saxiixa in la ID Apple aad. Fiiri sanduuqka hor iCloud adeegyada aad u jecel yihiin in ay awood. Riix codso inay ku dhameystaan ​​goobaha.
Sida loo isticmaalo Adeega iCloud
Hoos waxaa ku qoran warbixin faahfaahsan oo ku saabsan sida loo Mudanayaasha iyo isticmaalka, adeegyada iCloud:
Photo Stream Mail / Xiriirada / Kalandarada / Notes / Xusuusin Automatic Downloads aragtaan iPhone (Device) Safari Documents & xogta
Hordhac kooban: Photo Stream saamaxaya kuwa isticmaala inay wadaagaan sawirada dadka, sawiro dukaan ku iCloud muddo 30 cisho ah, iyo helitaanka sawirrada qalab kasta oo iCloud-karti.
Sida loo Calan:
On iPhone / iPod / iPad qalab: Settings tuubada> Photos & Camera, mari My Photo Stream oo Photo Sharing, si ON.
On Mac: Riix yar tufaax icon bidixda sare oo ka mid ah suuqa kala> rabtid System> hubiyo Photos> guji Options badhanka> hubiyo My Photo Stream oo Photo Sharing.
On PC: guddi Open iCloud Control aad kombuutarka> hubiyo Photo Stream. Riix Options, furmo cusub hubi My Photo Stream iyo La Wadaago Photo durdurro.
On iPhone / iPad / iPod, ka jaftaa Photo app> tuubada la wadaago hoose> tuubada Abuur New Stream , magacaabi webigu ku cusub iyo riix Next. In uu furmo suuqa soo socda Si deegaanka, riix icon wareega yar + inaad ku darto aad xiriirka la leedahay. Riix Abuur dhammayn goob ilaa.
On Mac: abuurtaan iPhoto ama Aperture. Riix Dhacdooyinka ama Photos in ay doortaan dhacdooyinka / photos iyo riix Share badhanka midig ee hoose. Riix New Photo Stream, ku dar xiriirada iyo faallo in saamiga. Riix Share.
On PC: marka aad ku rakiban iCloud Controal Panel iyo karti ay feature Photo Stream on your computer, cusub Photo durdurro qayb ka muuqan doonaa ka dib marka aad furitaanka Computer ee Windows Explorer. Waxaa fur oo guji New Photo Stream button. Magaca il sawirka iyo dar kale oo isticmaala iCloud Si sanduuqa si ay ula wadaagaan.
Mail / Xiriirada / Kalandarada / Notes / Xusuusin:
Falanqeynta Hordhac: iCloud kuu ogolaanayaa inaad la wadaagto aad xiriirada, mail, jadwalka taariikhda, qoraalada iyo xusuusinta ka mid ah iPhone, iPad, iPod, iyo kombiyuutarada in waqtiga dhabta ah.
On iPhone / iPad / iPod, tuubada Settings> iCloud> Kaadhkaaga oo dhan button u Mail, Xiriirada, baaqyada, xusuus qor, iyo xusuusinta ON.
On Mac: guji tufaax icon dhinaca biddix ee kore ee suuqa ku Mac> rabtid System> iCloud> hubiyo Mail, Xiriirada, baaqyada, xusuus qor, iyo Xusuusin siday u kala horreeyaan.
On PC: Open iCloud Control Panel> calaamadee sanduuqa Mail hor, Xiriirada, baaqyada, xusuus qor, iyo Xusuusin siday u kala horreeyaan
Sida loo isticmaalo: Ka dib markii ay u fidinno, mar kasta oo aad ka dhigi update ah u Mail, Xiriirada, baaqyada, xusuus qor, ama Xusuusin, update ka muuqan doontaa iPhone, iPad, iPod iyo computer.
Falanqeynta Hordhac: Downloads Automatic in iCloud dari doonaa wax kasta oo aad u iibsaday inay aad iPhone, iPad, iPod iyo Lugood on computer meel kasta oo aad iibsato shay.
On iPhone / iPad / iPod, Settings tuubada> Lugood & App Store, hoos u rogto iyo mari badhanka ee Update in ON.
On Mac: Daah Lugood> rabtid click> guji Store. Music, Buugaag iyo Apps Hubi in meesha Automatic Downloads.
On PC: abuurtaan Lugood> guji Edit> rabtid> guji Store. Hubi Music, Apps, Books, et. degaanka Automatic Downloads.
Sida loo isticmaalo: Ka dib markii ay u suuro-Downloads Automatic aad iPhone, iPod, iPad iyo Lugood kombiyuutarka, mar kasta oo download ah ay dhacdo, waxa ay la soo bixi doonaan dhamaan qalabka iyo computer si toos ah.
Raadi My iPhone (Device):
Falanqeynta Hordhac: Raadi My iPhone (iPad ama Mac) waa wax fudud in aad heshaan qalabka marka aad lumay (neceb odhan, laakiin waa run had iyo jeer waxaan u khasaarayn). Aad Xitaa markii aan iyaga ka heli kartaa dib, waxaad isticmaali kartaa Raadi My iPhone in masixi dhammaan xogta fog, ka hortagga dadka kale peeping macluumaadka shakhsi ahaaneed.
On iPhone / iPad / iPod, tuubada Settings> iCloud> toggle Raadi My iPhone in ON.
On Mac: guji tufaax icon on Mac> rabtid System> dooro checkbox Raadi aan Mac
Sida loo isticmaalo: Mar kasta oo aad u baahan tahay si ay ula socdaan qalab macruufka ama Mac, webpage furan iCloud on kombiyuutar kasta la siiyaa biraawsarkaaga web a> gasho iCloud la ID Apple aad> Riix Raadi My iPhone> Riix ikhtiyaarka Qalabka dooro qalab aad ka dhibicda Liiska -down. Next, fursado dheeraad ah oo ku qasbaya qalab aad u ciyaaro dhawaaq, hindisaha Khasaaray Mode iyo meel fog laga tirtira qalab muuqan doonaa. Dooro ah in ay kugu habboon.
Kooban, ka dib samaynta Safari, waxaad ka arki kartaa oo dhan boggagiisa marka aad furay mid ka mid ah aaladaha aad.
On iPhone / iPad / iPod , Settings tuubada> iCloud> toggle Safari in ON.
On Mac: guji tufaax icon on Mac> rabtid System> dooro checkbox ee Safari
On PC: furan iCloud Controal Panel> hubiyo checkbox ee Bookmarks
Sida loo isticmaalo: Ka dib markii ay u fidinno, Safari syncs doonaa waxyaabaha liiska akhriska iyo Bookmarks idin ​​abuuray ee wax qalab qalabka oo dhan. Si aad u raaxayn Safari Bookmarks qalabka macruufka, abuurtaan Safari> guji icon buugga ee badhanka. On Mac, abuurtaan Safari> guji icon buugaagta bidixda aad u sareysa.
Documents & Xogta:
Falanqeynta Hordhac: On iCloud, waraaqaha aad, sida Pages, Numbers, iyo Keynotes la wadaago via ka Documents & Data. Waxaa la dhexgeliyey shidmaan iWork iyo Microsoft Office.
On iPhone / iPad / iPod, Settings tuubada> iCloud> toggle Documents & Data in ON.
On Mac: guji tufaax icon on rabtid Mac> System> dooro Documents checkbox ah & Data.
Sida loo isticmaalo: bogagga web Open iCloud la browser web on your computer ah> gasho la ID Apple aad> dooran nooca file aad ku socoto in geliyaan (Pages: hadalka, RTF, waraaqaha qoraalka, Numbers: barasantigareeyaan Excel, Keynotes: bandhigyo files). Jiid oo hoos u file ka your computer deegaanka adag la wado webpage in ay.
Sida loo kaabta Data in iCloud iyo sida loo isticmaalo ee kaabta iCloud
Boggan waxaa daboola qaybaha soo socda:
Sida loo kaabta Data in iCloud Sidee soo celinta macruufka ka kaabta iCloud Sida loo Xulo Ladnaansho Data ka kaabta iCloud
Data Sida loo kaabta in iCloud
Qaadashada arrimaha ammaanka xogta tixgelin, haddii aad karti adeegyada iCloud, waa in gurmad aad macruufka qalab si iCloud si joogto ah aad. Mar kasta oo aad ka heli qaar ka mid ah xog muhiim ah oo ku saabsan iCloud maqan yahay, dib u aad ka heli karto by celinta qalab ka iCloud ama eegista qaado xogta laga gurmad iCloud. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fudud in macruufka gurmad si iCloud:
Tallaabada 1. Isku aad iPhone, iPad ama iPod la Wi-Fi.
Tallaabada 2. Settings tuubada> iCloud> Kaydinta iyo kaabta ku saabsan qalabka macruufka.
Tallaabada 3. Kaadhkaaga iCloud kaabta in ON. Riix OK si infor ah "Your iPhone gurmad mar dambe si aad u computer si toos ah marka aad u hagaagsan doonaa Lugood". Tubada kaabta Hadda .
Sida loo soo celiya macruufka ka kaabta iCloud
Mar kasta oo aad u baahan tahay xog jirka qaar ka mid ah ka gurmad iCloud in aad iPhone, iPad ama iPod, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka hoose si loo soo celiyo aad iPhone, iPad, iPod ama ka gurmad iCloud.
Tallaabada 1. Tubada Settings> General> celi> masixi All Content iyo Settings ku saabsan qalabka macruufka.
Tallaabada 2. Dooro Soo Celinta ka kaabta iCloud , saxiixo in la ID Apple iyo dooran gurmad iCloud ah si loo soo celiyo.
Sida loo Xulo Ladnaansho Data ka kaabta iCloud
Ka sokow helitaanka xogta aad maqan by celinta qalabka macruufka dib, sidoo kale eegista aad soo kaban karto, xogta laga gurmad iCloud. Sidaas si gaar ah faa'iido markii aad go'aansato inay iska ilaawaan qalab macruufka ah in telefoonada Android (kiniiniga) ama qalabka macruufka aad laga badiyay halka doonaya in ay qaado xogta ka gurmad iCloud.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) on your computer. Guji "ka iCloud File kaabta Ladnaansho Data".
Tallaabada 2. Aayad in iCloud la ID Apple iyo soo bixi iCloud gurmad file.
Tallaabada 3. Riix Scan si ha barnaamijkan baarista iCloud gurmad file, sort dhammaan xogta galay qaybaha. Ka dibna, waxaad dooran kartaa xog doon doonayay, sida xiriirada, sawiro, videos, qoraalo, jadwalka, iwm guji Ladnaansho iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Sida loo Hubi iCloud Kaydinta Sidee oo bilaash ah ilaa iCloud Kaydinta Sida loo Hagaaji iCloud Kaydinta Sida loo hoos iCloud Kaydinta
* Sida loo Hubi iCloud Kaydinta:
Ma rabtaa inaad aragto inta aad iCloud Kaydinta waxaa looga tegey? Hubi kaydinta iCloud:
On iPhone / iPod / iPad: Settings tuubada> iCloud> Kaydinta & kaabta
On Mac: guji tufaax icon ku saabsan suuqa kala Mac> rabtid System> iCloud> Maamul
Windows 8.1: tagaan si ay suuqa kala Start iyo guji fallaadhiina waxay ka hoos. . Riix app iCloud oo guji Maamul
Windows 8: tagaan si ay suuqa kala Start iyo guji horyaalka iCloud ah. Riix Maamul.
Windows7: riix si aad u furato menu bilowga> All Programs> iCloud, ka dibna riix Maamul.
* Sidee oo bilaash ah ilaa iCloud Kaydinta:
ID kasta Apple aad deeq la 5GB meel iCloud lacag la'aan ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ka heli doontaa in ka dib markii ay taageerto kor u macruufka si aad u iCloud u dhawr jeer, kaydinta waa mid aad u yar in ay ku kaydiso wax. Xaaladdan oo kale, haddii aanad haysan qorshe kasta oo lagu casriyeeyo kaydinta iCloud, sida kaliya oo lacag la'aan ah lagu kaydiyo iCloud waa in ay tirtirto iCloud files gurmad jir ah:
Tallaabada 1. Tubada Settings> iCloud> Kaydinta & kaabta> dooran Maamul Kaydinta aad iPhone, iPad ama iPod.
Tallaabada 2. Dooro gurmad hore aad rabto in aad tirtirto oo ka jaftaa cas Delete doorasho ee kaabta. Markaas xaqiijin Kabcada_ by siyoodba dami & Delete. (Fiiro gaar ah: kaliya ma xasuusto in ay tirtirto gurmad ugu dambeeyey.)
* Sida loo Hagaaji iCloud Kaydinta:
Haddii aad ka heli kaydinta iCloud waa mid aad u yar yar si ay u isticmaalaan, ka sokow kor ku xusan in ay tirtirto iCloud files gurmad, ayaa sidoo kale u cusboonaynta kartaa iCloud Kaydinta by bixinta lacagta. Waxaad u cusboonaynta kartaa kaydinta iCloud aad iPhone, iPad, iPod, iyo computer.
On iPhone / iPod / iPad: Settings tuubada> iCloud> Kaydinta & kaabta> iibso More Kaydinta. Dooro casriyayn ah, ka jaftaa Buy iyo geli sirta ID Apple.
On Mac: guji icon inankeeda bidixda aad u sareeya ee suuqa kala Mac> rabtid System> dooran iCloud; Riix Maamul hoose> guji Plan Change Kaydinta> dooran hagaajinta iyo riix Next. Waxaad ku qortaa erayga sirta ah ID Apple.
On PC: furan iCloud Control Panel> Riix Maamul> guji Plan Change Kaydinta> dooran casriyayn ah ka dibna riix Next. Ku qor ID Apple iyo guji Buy.
Hoos waxaa ku qoran shaxda ah u hagaajinta iCloud. Waxaad ka eegi kartaa qiimaha.
* Sida loo hoos iCloud Kaydinta:
On iPhone / iPod / iPad: Settings tuubada> iCloud> Kaydinta & kaabta. Tubada Plan Kaydinta Change> hoos Options. Ku qor ID Apple iyo dooran qorshe oo kala duwan si ay u isticmaalaan aad kaydinta iCloud.
On Mac: guji icon inankeeda aad Mac> rabtid System> iCloud. Riix Maamul> Plan Change Kaydinta> hoos Options. Ku qor ID Apple iyo guji Maamul. Dooro qorshe kala duwan kaydinta iCloud oo guji sameeyo.
On PC: furo guddi iCloud Controal> Maamul> Plan Change Kaydinta> hoos Options. Ku qor ID Apple iyo guji Maamul. Dooro qorshe cusub oo aad iCloud Kaydinta iyo Riix qabtay.
> Resource > iCloud > Talooyin Center: Sida loo Isticmaalo iCloud, kaabta iCloud iyo iCloud Kaydinta